Qeybta:Warqadaha Iskaashiga3 min akhris
Sanduuqa Waxqabadka Cimilada ee Minneapolis iyo Sanduuqa Sinnaanta Jinsiyadaha ayaa ku dhawaaqay $250,000 oo deeqo ah oo la siiyay lix hay'adood oo qabanaya shaqo cusub si ay tallaabo maxalli ah uga qaadaan isbedelka cimilada.
The sanduuqa sadaqada, iskaashi ka dhexeeya Magaalada Minneapolis, Minneapolis Foundation iyo Machadka McKnight Foundation, oo la siiyay deeqahaas:
$50,000 Xubnaha Beesha ee Caddaaladda Deegaanka mashruuc loogu talo galay inuu isku soo ururiyo deriska si ay u wadaagaan aqoonta una sameeyaan qorsheyaal ku saabsan u diyaargarowga xaaladaha degdegga ah iyo arrimaha caddaaladda deegaanka iyo xalka Waqooyiga Minneapolis.
$25,000 ilaa Cusboonaysiinta MN Hadda loogu talagalay barnaamij lagu siinayo nidaamyada tamarta qorraxda saqafka sare guryaha ku yaal agagaarka Waqooyiga Minneapolis, iyo in mulkiilayaashooda loo wareejiyo milkiileyaasha.
$50,000 ilaa Qoyska Cadceedda, Hay'ad samafal oo waddanku hogaaminayo oo dhiirrigelisa waxtarka tamarta, tamarta dib loo cusboonaysiin karo, iyo isu-beddelka tamarta loo siman yahay ee loo maro waxbarashada, tababarka shaqaalaha, iyo muujinta. Deeqdani waxay ku maalgelin doontaa Saaxiib si loo taageero kaabayaasha tamarta iyo dadaallada adkeysiga ee ka dhex curtay bulshada Little Earth ee Minneapolis.
$50,000 ilaa Pillsbury United Community loogu talagalay nidaamka beeraha magaalooyinka ee sameynta saameyn wanaagsan ku leh deegaanka isla markaana soo saara cunto caafimaad leh, oo deris lagu beero. Hadda oo ay galeyso xillikeedii shanaad, Pillsbury United Farms iyo ku-dhaqankeeda beerashada dib-u-cusboonaysiinta waxay dayactireysaa dhulka ku yaal xaafadaha Minneapolis 'Green Zone, iyadoo la yareynayo saameynta isbeddelka cimilada ee bulshada BIPOC, iyo in si dhab ah bulshada looga qayb galiyo xallinta cimilada.
$50,000 ilaa Mashruuca Sweetie Pie loogu talagalay barnaamijkeeda 'Northside Safety NET (Neighborhoods Empowering Teens)'. Wada-hawlgalayaasha iskaashigan ayaa horumarin doona oo hirgelin doona barnaamij tababar oo loogu talagalay dhalinyarada midabka leh, da'da 16-24, Waqooyiga Minneapolis. Dhallinyarada barnaamijka ku jirta waxay khibrad ka heli doonaan dhaqdhaqaaqa caddaaladda deegaanka, adeegga bulshada, beerashada magaalooyinka, hoggaanka, iyo inbadan.
$25,000 ilaa kan Xarunta Bulshada ee Sabathani oo loogu talagalay ilaalinta tamarta iyo qorsheynta qorraxda. Mashruucan, oo calaamad u ah bilowga wadashaqeynta Xarunta Tamarta iyo Deegaanka, ayaa u oggolaan doonta xarunta bulshada ee Koonfurta Minneapolis in ay bilowdo qorsheynta dib-u-habeyn ballaaran iyo kor u qaadista nidaamyadeeda tamarta ee soo jireenka ah, aan fiicnayn, iyo kuwa qaaliga ah.
Guud ahaan, Sanduuqa wuxuu helay codsiyo $930,000 oo ka yimid 26 codsi sannadka 2020. Guddi ka kooban lix xubnood oo bulshada ka socda ah oo ka kala socda Magaalada Minneapolis 'Waqooyiga iyo Southside Green Zones, oo ay weheliyaan xubno ka tirsan Guddiga La-talinta Jinsiga Sinnaanta Jinsiyadaha ee Minneapolis, ayaa ku biiray lix wakiil ka socda Magaalada Minneapolis, Machadka McKnight, iyo Minneapolis Foundation si loo qiimeeyo codsiyada.
Sanduuqa wuxuu bixiyaa deeqo loogu talo galay meelaynta ku saleysan bulshada, iyo bulshada oo mashruucyo horseedaysa hoos u dhac muuqda oo qiiqa gaaska deegaanka. Maalgalintu waxay taageertaa soo jeedinno ku saabsan hal ama in ka badan yoolalka Qorshe Hawleedka Cimilada ee Minneapolis, oo ay ka mid yihiin:
Yaraynta maylalka gawaarida safray
Dhiirrigelinta dadaallada dib-u-warshadaynta, dib-u-isticmaalka iyo haddii kale in la yareeyo qashinka bulshada qulqulaya
Waqtiga wareegga xiga ee deeq-lacageedka ayaa goor dhow la ogaan doonaa. Saxiix si aad uga hesho cusbooneysiinta emaylka Minneapolis Foundation oo ku saabsan fursadaha deeqaha. Ganacsiyada iyo xubnaha bulshadu waxay ku darsan karaan sanduuqa iyagoo qoraal u diraya CLIMATEMPLS 243725, ama tagaya cimilada iyo hawada.
Tallaabada Cimilada ee Minneapolis iyo Sanduuqa Sinaanta Sinaanta Naafada ayaa hakisay Sanadkii Koowaad ee guuleysta iyadoo Deeqaha la siiyo $65,000